Ukulunywa kweSoy Ginger Steak (Ithenda kanye Namanzi) - Ungadliwa
okuhambisana namasangweji enkukhu yesaladi
umehluko phakathi kwe-marinara ne-pasta sauce
Isaladi eyisendlalelo engu-7 egqoke ipulazi
ungayisika kanjani ithenda yengulube
ukupheka amathiphu enkomo isikhathi esingakanani kuhhavini
Ukulunywa kweSoy Ginger Steak
Ama-Soy Ginger Steak Bites ahlanjululwa nge-ginger, garlic, ne-sesame flavour! Ukulunywa kufakwa epanini elishisayo kuze kube yigolide ngaphandle kuthi kube namanzi amnandi phakathi.
i-mini no bake cheesecake recipe ngama-vanilla wafers
Lokhu kungakhonzwa njengesikhalazo noma njengokudla. Uma ufuna iresiphi entsha yokujabulisa izivakashi, nakhu!
Ukulunywa kwe-Steak Steak
Siyayithanda le recipe ngoba ukunambitheka kuyamangalisa .
I-steak ifakwe epanini elishisayo elithatha imizuzu nje, ngakho-ke esheshayo lula !
imfanzi elula inyakazisa gazinga ngama-noodle
Futhi kunokusetshenziswa okuhlukahlukene - kubakhonze njengesikhalazo noma njengokulunywa ngediphu. Bakhonze ngohlangothi lwe ilayisi elithosiwe futhi bok choy ukudla okulula.
Le marinade ilungele wonke ama-steaks, iphelele ku-grill (noma epanini ngeresiphi engezansi) futhi yenzela i-yummy marinade inyama yenkomo .
ukugqoka izimbiza ngamapulazi e-pepperidge
Izithako zokulunywa nge-steak kulula kakhulu ukuzithola, ungahle ube usunazo ekhishini!
Khetha i-steak emakwe kahle, noma yini oyithandayo ku-grill izoba yinhle kule recipe. I-Sirloin noma i-ribeye steaks yizintandokazi zethu ngoba zithambile.
Le marinade ineza ukunambitheka kanye nokugcina inyama yenkomo ithenda eyengeziwe (nokusiza nge-caramelization).
Nginguye ungeza usawoti nokujula.
Garlic & ginger engeza ukunambitheka.
Ushukela onsundu ingeza ubumnandi futhi isiza nge-caramelization.
Ijusi likalamula ingeza ukusha futhi ithenda.
Chili ishq engeza ukushisa okuncane (sub out sriracha uma ungathanda).
Indlela Yokwenza Ukulunywa Kwenyama
Le recipe kulula ukuyilungisa, kepha uma kukhulunywa ngokunambitheka iyakhipha impela!
inyama yenkomo nesipinashi lasagna roll ups
Hlanganisa ndawonye izithako ze-marinade bese uphonsa ngezingcezu ze-steak. Hamba okungenani imizuzu engama-30.
I-steak yokupheka iluma emafutheni ngokusho kweresiphi engezansi.
Phonsa ibhotela bese ukhonza.
Amathiphu wokulunywa ngamathenda
Khetha ama-steaks amahle.
Marina ukuthola ukunambitheka kepha kungabi ngaphezu kwamahora ama-2. Ngaphezulu kokuhlanza i-steak yethenda kungayenza iphenduke i-mushy.
Hlangisa ipani bese uqinisekisa ukuthi liyashisa ngaphambi kokupheka.
Unganyakazisi kakhulu, vumela ifomu loqweqwe ngaphambi kokuyaluza.
Ungagcwalisi ipani noma ukuluma ngeke kuqubule. Pheka ngamaqoqo.
Ungadli ngokweqile. I-steak ingaba (futhi kufanele) ibe pink phakathi.
I-Savory Steak engaphezulu
I-Air Fryer Steak - kusuka okusha noma iqhwa
I-Steak Fajitas eyosiwe - nge-chili-lime marinade
Ama-Tacos alula we-Steak - kuyashesha futhi kulula
Isangweji le-Steak elosiwe - wakhonza ku-toast kagalikhi
UPhilly Cheesesteaks - ilungele usuku lomdlalo
Ukulunywa kwe-Garlic Butter Steak - ilungile ngemizuzu engama-20
Ngabe wenze lokhu kulunywa kwe-Soy Ginger Steak? Qiniseka ukuthi ushiya isilinganiso namazwana ngezansi!
5kusukaishumi nanyeamavoti BuyekezaIresiphi
Isikhathi sokulungiselela10 imizuzu Isikhathi Sokupheka5 imizuzu Isikhathi seMarinate30 imizuzu Isikhathi EsipheleleIsine imizuzu Izinkonzo6 izinsizakalo UmbhaliUHolly Nilsson Lezi zilonda ze-Soy Ginger Steak zinamanzi, zithenda, futhi zigcwele ukunambitheka okumnandi-okumnandi! Phrinta Phina
▢1 ½ amakhilogremu inyama yenkomo i-sirloin, i-strip loin, noma i-ribeye
▢1 isipuni uwoyela wemifino
▢3 ama-clove ugaliki igayiwe
▢ezimbili wezipuni ushukela onsundu
▢ezimbili wezipuni ngiyi-willow
▢ezimbili amathisipuni ujinja kusha, kugayiwe
▢½ isipuni ama-flakes abomvu abomvu
Hlanganisa izithako ze-marinade. Sika izingcezu zibe yizicucu ezilumayo bese ufaka kuma-marinade.
Ifriji imizuzu engama-30 noma kufika emahoreni amabili. Susa kusuka ku-marinade okuvumela okweqile ukuthi kuconse. (Lahla ama-marinade asele).
Hlangisa i-skillet enkulu ngokushisa okuphakathi naphakathi. Faka isipuni esingu-1 samafutha yemifino.
Faka i-steak kusendlalelo esisodwa bese upheka imizuzu engama-2-3 ngaphandle kokugqugquzela ukuthola uqweqwe ohlangothini olulodwa. Govuza bese upheka iminithi elilodwa ngaphezulu. Ungadli ngokweqile.
Susa ekushiseni, uphonsa ngebhotela. Gcoba ngembewu yesame no-anyanisi oluhlaza uma ufisa. Khonza ngokushesha
Qinisekisa ukuthi i-marinade eyeqile isukile ku-steak noma ngeke uthole uqweqwe oluhle. Pheka ama-steak ngamaqoqo uma kudingeka. Uma ipani ligcwele ngokweqile, ngeke uthole uqweqwe oluhle.
Amakholori:442,Amakhabhohayidrethi:8g,Amaprotheni:35g,Amafutha:30g,Amafutha agcwalisiwe:ishumi nanhlanug,Cholesterol:111mg,I-Sodium:622mg,Potassium:484mg,Umucu:1g,Ushukela:6g,Uvithamini A:187IU,Uvithamini C:1mg,I-calcium:amashumi amabili nanyemg,Insimbi:3mg
Igama elingukhiyeI-Soy Ginger Steak Bites, iresiphi ye-Soy Ginger Steak Bites, i-Steak Bites, i-Steak Bites Recipe InkamboIsikhangisi, Inyama Yenkomo, Ukudla Kwemicimbi KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .